Duullimaadkii gegida diyaaradaha Cabdullaahi Yuusuf ee Gaalkacyo oo xiritaan qarka u saaran (dhegayso) – Radio Daljir
Duullimaadkii gegida diyaaradaha Cabdullaahi Yuusuf ee Gaalkacyo oo xiritaan qarka u saaran (dhegayso)
Diseembar 13, 2019 1:43 g 1
Garoonka diyaaradaha ee magaalada Galkacyo ee Cabdillaahi Yuusuf Airport oo muddo dheer ahaa mid ka mid ah garoomada ugu mashquulka badan Puntland, dhanka kalana kaalimaha hore uga jiray wax-soosaarka dhaqaalaha iyo dakhliga dawliga ah, ayaa hadda wajahay marxalad middaasi ka duwan oo hoos u dhicitaan ah.
Waxaa yaraaday duullimaadadii diyaaradeed ee isticmaali jiray garoonka Cabdillaahi Yuusuf, kuwaasi oo badankoodu u wareegay isla garoon kale oo ku yaalla magaalada Galkacyo oo shaqo galkiisu uu ahaa muddo aan dheerayn, halka garoonka Cabdillaahi Yuusuf na uu ka mid ahaa garoomadii shaqaynayey wakhtiga badan, ahaana kuwii dawladdii dhexe dalka ay uga dhacday. Sidoo kale waxaa aad hoos ugu dhacay dakhligii dhaqaale ee ka soo xaroon jiray garoonkaasi, maadaama badanka ay ka wareegeen macaamiishii adeegsan jiray garoonkaas.
Arrimahaan ayaa loo sababaynayaa dhawr qodob oo midi tahay garoonka oo aan helin wax dayactir ah oo muuqda muddadii dheerayd ee uu shaqaynayey, gacantana uu ku hayey maamulka Puntland. Waa tan labaad canshuurta garoonkaasi ee laga qaado dadka dhoofaya iyo diyaaradaha ka degaya ama ka duulaya oo labo jibaar ka badan midda lagu qaado garoonka kale ee ku yaalla isla magaalada Galkacyo siiba dhanka Galmudug.
Arrimahaasi oo is biirsaday waxay sababeen badan shirkadihii duullimaad ee isticmaali jiray garoonka diyaaaradaha ee Galkacyo ee Cabdillaahi Yuusuf in ay ka wareegeen, iyagoo u digo-rogtay garoonka kale maadaama aysan jirin mudnaan loo tixgeliyo oo u gaar ah ama uu kala gudboonyahay garoomada kale.
Shirkadaha duullimaadada ee ka hawlgala magaalada Galkacyo, xafiisyada kala duwanna ku leh gobolka iyo goobo badan oo dalka ah ayaa cabasho arrinkaan iyo wax ka qabashadiisa la xiriirta u gudbiyey dawladda Puntland ee dhexe iyo maamulkeeda gobolka, hase ahaatee sida ay Radio Daljir u xaqiijiyeen madaxda shirkadaasi duullimaadada cabashadoodaasi lagama jawaabin, waxayna ahayd mid muddo dheer sannado ah soo jiitamaysay.
Maxamed Cabdiwaaxid Cabdillaahi waa guddoomiyaha Dallad ay ku midaysanyihiin shirkadaha duullimaadada ee gobolka Mudug ka hawlgala, laguna magacaabo MUGGA, wareysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya oo uu siiyey Radio Daljir, ayuu uga hadlay xaalka cakiran ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Galkacyo ee Cabdillaahi Yuusuf Airport.
Cabdifataax Cumar Geeddi ayaa marka hore waydiiyey dalladdooda iyo waxay u asaasantahay.
JIGJIGA: Saxaafadda madaxabannaan oo loo diidey shirkii Xildhibaanada DDS
Cabdullaahi M Idiris 8 months ago
Qorshe xumo ayaan u arkaa, intii ladhisay puntland hadday maalinlintii $50 ama $100 udhigaan
Dayactirka Garoonka sidaan ma noqdeen. Ilaahow dadkayaga tus shaqada qurxoon iyo danta deegaankooda